Muwaadin Soomaali oo ay xaaskiisa geeriyootay oo codsi u diray Dowladda Maraykanka – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Saciid Cilmi waxa uu ka codsaday Wakiilladda Kongareeska ee Gobalka VERMONT ee dalka Maraykanka inay ka taageeraan sidii Hooyadiisa oo ku jirta Xero Qaxooti oo ku talala dalka Uganda loogu fududeyn lahaa in la keeno Maraykanka.
Aabahaasi oo 34-jir ah waxa uu Codsigaasi Aadminimo codsaday, kadib, markii ay Xaaskiisa dhawaan ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay magaalladda BURLINGTON.
Saciid Cilmi oo shaqaale ka ah Shirkad dharka samaysa waxa uu sheegay inay murugo ka qaadeen geerideeda, isla markaana uusan wax ehel ah u joogin Maraykanka.
“Tan iyo markii uu shilku dhacay, waxay carruurtayda yar I weydiiyaan halka ay jirto Hooyadooda” ayuu yiri Saciid Cilmi.
Waxa uu intaasi ku daray haddii ay Hooyadiisa oo haatan ku jirta Xero Qaxooti oo ku taalla Uganda joogi lahayd Maraykanka inay iyada daryeeli lahayd carruurtiisa inta uu shaqada ku maqan yahay.
Allaha U Naxariisto xaaskiisa oo la oran jirey Luul Cali Guure oo 29 jir waxay bilowgii isbuucan ku geeriyootay shil gaari, waxayna ifka kaga tagtay 7 carruur oo da’dooda u dhexeyso hal sanno jir ilaa 12-jir.
Saciid Cilmi waxay isaga iyo xaaskiisa oo ku noolaan jirey Xero qaxooti oo ku taalla Kenya waxay dalka Maraykanka ka heleen Dib-u-dejin dabayaaqadii bishii December ee sannadkii 2016-kii, ku-dhawaad 2 bilood ka hor inta uusan Madaxweyne Donald Trump saxiixeen Amarkii Fulinta ee uu Qaxootiga ka soo jeeda 7 Waddan oo Muslim ah kaga mamnuucay inay Maraykanka soo galaan.
Dhinaca kale, Marxuumadda hooyadeeda ayaa la sheegay inay haatan ku jirto Xero Qaxooti oo ku taalla dalka Kenya.
Wasaaradda Ganacsiga oo mamnuucday keenista Qalabka Carruurta ee maalmaha Ciida(Wareegto)